भोकै हुनुहुन्छ ? खुलामञ्च जाऔं, टन्न खाऔं (फोटोफिचर) | Kendrabindu Nepal Online News
भोकै हुनुहुन्छ ? खुलामञ्च जाऔं, टन्न खाऔं (फोटोफिचर)
१५ भाद्र २०७७, सोमबार १८:४३
काठमाडौँ। कोरोनो भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाले धेरैलाई हातमुख जोर्न सकस परेको छ । करिव ४ महिना लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाको १२ औं दिनसम्म आइपुग्दा विशेषतः दैनिक ज्यालादारी काम गरी जीवनयापन गर्नेहरुको दैनिकी कष्टप्रद बन्न पुगेको छ । लकडाउन अन्त्य भएसँगै राजधानी काठमाडौं फर्किएकाहरु फेरि पछुताउन थालेका छन् ।
यावत् कुरालाई मध्यनजर गर्दैै हन्ड्रेड समूहले खुल्लामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको छ ।
दैनिक ज्यालादारी गरी जिविकोपार्जन गर्दै आएकाहरुलाई र असहाय व्यक्तिहरुलाई काठमाडौंको खुला मञ्चमा हन्ड्रेड समूहले खाना खुवाउँदै आएको हो । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु भएपछि चैत १८ गते देखि नै निरन्तर सडकमा खाना खुवाउँदै आएका यी दुई समूहले यसपटक खुलामञ्चमा दैनिक दिउसो ४ बजेपछि खाना खुवाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले खाना खुवाउन थालेपछि दैनिक रुपमा ज्यालादारी गरेर जीविको पार्जन गर्दै आएका मानिसहरु दिनहुँ खानाको प्रतीक्षामा रहेका हुन्छन् । तीनै व्यक्तिहरुलाई खाना खुवाउने उद्देश्यले युवा अभियान्ताहरु दैनिक रुपमा दिउँसो ४ बजे खाना लिएर खुलामञ्च पुग्छन् । त्यति नै बेला दिउसो ३ बजेदेखि नै खाना खानका लागि मानिसहरु पुगिसकेका देखिन्छन् । देश विदेशमा रहेका शुभचिन्तकहरुको सहयोगमा खाना खुवाउँदै आएको अभियान्ताहरुले बताएका छन् ।
अहिले उनीहरुले दैनिक ५ सयको हाराहारीमा मानिसहरुलाई खाना खुवाउँदै आएका छन ।
काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्यलाई कोरोना संक्रमणNext
खुल्लामञ्चमा सटर बनाएर चर्को भाडा असुली (भिडियोसहित)